म्युजिक भिडियोमा ९ नायिका : कसको पारिश्रमिक कति ? | Celebrity Nepal
म्युजिक भिडियोमा ९ नायिका : कसको पारिश्रमिक कति ?
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्राय नायिकाहरुको करिअर म्युजिक भिडियोबाट शुरु भएको पाइन्छ । म्युजिक भिडियोबाट करिअर शुरु गरि चलचित्रमा ब्यस्त बनेका नायिकाहरु समेत म्युजिक भिडियो छाड्न सकेका छैनन् । उनिहरु चलचित्रसंगै म्युजिक भिडियोको कामलाई पनि संगसंगै अगाडि बढाएका छन् । वर्षमा १/२ वटा मात्र चलचित्र खेल्ने नायिका मात्र होइन, चलचित्रमा चम्केका नायिकाहरु समेत बेलाबेलामा म्युजिक भिडियोमा झुल्किनै रहन्छन् ।
त्यसको कारण हो,–राम्रो पारिश्रमिक ।
छोटो समय र विनाझण्झट राम्रो कमाई हुने भएपछि नायिकाहरु म्युजिक भिडियोको मोहबाट टाढा बस्न नसकेका हुन् । वर्षमा १/२ वटा मात्र चलचित्र खेलेर जिविकोपार्जन गर्न नायिकाहरुलाई गाह्रो पर्छ । तर वर्षमा एक/दुई वटा मात्र चलचित्र खेल्ने केही नायिकाहरु म्युजिक भिडियोबाट राम्रो कमाउँछन् ।
सेलिब्रेटी नेपालले म्युजिक भिडियोका व्यस्त केही निर्देशकहरुसंग नायिकाहरुको म्युजिक भिडियोको पारिश्रमिकबारे बुझ्ने प्रयास गरेको छ ।
प्रियंका कार्की : पछिल्लो समय चलचित्रमा ब्यस्त नायिकामध्ये प्रियंका अग्रपंत्तिमा पर्छिन । उनि चलचित्र छायाँकनबाट फुर्सदमा रहेको बेला म्युजिक भिडियोलाई समय दिन्छिन् । निर्देशकहरुका अनुसार कार्कीले म्युजिक भिडियोका लागि ५० देखि ७० हजारको हारहारीमा पारिश्रमिक लिने गर्दछिन ।
आँचल शर्मा : म्युजिक भिडियोबाट चलचित्रको यात्रा तय गरेकी आँचल म्युजिक भिडियोमा उत्तिकै ब्यस्त देखिन्छिन् । उनि म्युजिक भिडियोबाट राम्रो पारिश्रमिक पनि लिन्छिन् । कुराकानीका क्रममा एक निर्देशकले भने, ‘आँचलको म्युजिक भिडियोको पारिश्रमिक प्रियंकाको बराबर छ ।’ उनका अनुसार आँचल एउटा म्युजिक भिडियोका लागि ७५ हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिन्छिन् ।
माला लिम्बु :
चलचित्रमा खासै चल्न नसकेकी माला म्युजिक भिडियोमा भने देखिरहन्छिन् । उनि एउटा म्युजिक भिडियो खेलेवापत् ४० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिन्छिन् ।
वर्षा राउत :
वर्षा म्युजिक भिडियो हुँदै चलचित्रमा प्रवेश गरेकी हुन । म्युजिक भिडियोमा उनको पारिश्रमिक राम्रै छ । उनि ४० हजारदेखी ५० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिएर काम गर्छिन् ।
वर्षा शिवाकोटी :
वर्षा शिवाकोटी पनि बेलाबेलामा म्युजिक भिडियोमा देखिरहन्छिन् । यी सुन्दर मोडेल तथा नायिका म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेवापत ३० देखी ४० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छिन् ।
रीमा विश्वकर्मा : नायिका रिमा विश्वकर्मा म्युजिक भिडियोका लागि ३० देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छिन् । उनि पछिल्लो समय नेपाल आइडलको होस्ट बनेकी छिन । त्यसले गर्दा पनि उनको चर्चा बढेको छ ।
निता ढुंगाना : चलचित्रबाट बाट निस्केको फुर्सद को समयको सदुपयोग गर्दै निताले म्युजिक भिडियोमा समय दिन थालेकी छिन् । उनि अभिनित म्युजिक भिडियो छोटो–छोटो समयमै दर्शकले हेर्न पाउँछन् । उनि म्युजिक भिडियोबाट ३० देखी ४० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिँदै आएकी छिन् ।
अनु शाह : चलचित्रमा चम्किन नसकेकी अनु म्युजिक भिडियोमा भने राम्रैसंग चम्केकी छिन् । लोकदोहोरी, तीज, आधुनिक प्राय सबै खालका म्युजिक भिडियोमा देखिरहन्छिन् । उनि म्युजिक भिडियोबाट २० देखी ३० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिन्छिन् ।